Ahoana no fanavaozana ny rindrambaiko Wahoo Kickr? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Fanavaozana ny firmware Kickr - boky torolalana feno
Fanavaozana ny firmware Kickr - boky torolalana feno
Ahoana no fanavaozana ny rindrambaiko Wahoo Kickr?
Raha vao nyKICKRdia ampifandraisina ary mifandray tanteraka amin'nyWahoofampiharana, kitiho ny mailaka mankanyVaovao farany Firmwareizay hita eo ambony raha misy kinova vaovao. Raha nyvaovao faranytsy mahomby, avereno indray ny fizotrany amin'ny fanidiana sy fanokafana tanteraka nyWahoofampiharana.
Androany isika dia mijery ny fanitsiana firmware farany avy amin'ny Wahoo ho an'ny unit Kickr tany am-boalohany, noho izany ny kinova firmware iray teboka dimy teboka enina valo dia navoaka tamin'io fotoana io tamin'ny herinandro lasa teo ary tena mendrika ny fanavaozana noho izany indrindra ho an'ireo singa kicker voalohany izay navoaka tamin'ny 2013 dia aza atao kicker 2 na handroaka anao eto, ka ireto singa roa ireto no hojerentsika anio. Nanavao aho omaly alina ary ny sasany mahazo isa amin'ny alàlan'ny fanavaozana ity rindrambaiko ity dia handeha amin'ity iray ity ary handalo ny fizotran'ny fihodinana sy ny dikan'izany rehetra izany koa izahay. Ny antony lehibe itiavanao an'ity fanavaozana ity amin'ny kicker anao dia satria saika nanova ireo singa voalohany ireo ho an'ny kicker izy - avelao aho hanazava ny fandehany.
Ny mpandika tany am-boalohany dia nandrefy ny zava-bita, izay eto ity kapila ity. Azonao atao ny mahita fa misy hetsika kely iray izay mitovy tanteraka amin'ny fatra fandrefesana y mitovy amin'ireo fatra fandrefesana amin'ny metatra herinaratra hafa amin'ny bisikiletanao ary rehefa nivezivezy io kapila io dia natosika handroso kely aho ary io fandrefesana io no ny anao Power aseho eto amin'ny kicker - tsy mihetsika ity kapila ity, manisa ny herin'ny herin'ny braking sy ny fanoherana ary ny hafainganana sy ny hafainganana ary ny mari-pana maro hafa amin'ny fikajiana manidina eto eto an-tany Ho lany andro aho avelao aho hampiseho aminao ny fomba fandrefesan'ny mpandeha tany am-boalohany ny fahombiazany amin'ny fomba roa ankehitriny ny fomban'ny fatra fandrefesana ny maody na ny maody maodely, izay kicker indray - ny maody maodely miasa dia tokony ho marina toy ny fatra ampiasain'ny calibrated azo itokisana sy mamaly haingana kokoa izao ny valiny haingana dia fotsy ihany koa Ny singa iray hafa manandanja tadiavinao dia ny fiakarana tampon'ireo tampon-tampona sy ny tendrony ary koa amin'ny maody Ag, manana valiny haingana kokoa ianao Izaho izay fandresena lehibe, noho izany dia navaoziko ity, alao ny dingana fanavaozana ny firmware amin'ny alàlan'ny fandefasana ity fitaovana ity eto. Ampiasao ny fampiharana Wahoofitness, ity no iPhone-ko.
Fomba mitovy amin'izany ho an'ny Android raha misafidy ny mpandoko mavo anao ianao dia ho hitanao ho azy fa misy lahatsoratra ho an'ny firmware satria misy firmware misy taloha izy ary misy enina dimy tonga eto dia nampandehaniko haingana io, mila minitra vitsy, OK firmware - Vita ny fanavaozana, tokony hamono ny Bluetooth isika ary hiverina hatrany amin'ny telefaonintsika ary alefantsika ary hodinihintsika ihany koa ny kicker ary hidina any izahay dimy enina valo farany firmware izao Manana safidy ho an'ny spin-down mihamitombo ao anaty fihodinana -Down menu ka tsindrio eo io ary manafaingana an'ity indray mandeha ity aho ka nanao 10 minitra alohan'ny telo minitra izay hahatonga anao hanao izany mba hahazoana antoka fa mafana ny rafitra ary andao alao ny volombava Toy izay azo atao ihany ny mampihena, ka aorian'ny telo minitra mahazatra ny fomba fanabeazana mahazatra dia fantatsika izay rehetra momba an'i Miles, mety hampiseho zavatra hafa izy io, saingy eto amin'ny kilometatra kilometatra izahay dia entinay miadana ny 36 km / h ary raha vantany vao fotoana tokony hijanonan'ny pedal intsony, miandry ny rafitra hampihena ny spe ed, hangataka anao hamerina azy izy avy eo, noho izany zavatra hafa ilay mandroso miankohoka misy fihodinan'ny roa, manomboka miadana tsimoramora indray ary ampidino amin'ny zero ny tadidinao izay somary haingana kokoa ary vita izahay manome hery fanidiana anao sandan'ny teboka iray voalohany ary izao dia azonao atao ihany koa ny mahita ny habetsaky ny braking amin'ny fampahalalana saro-pady satria mandeha iray izahay Raha vantany vao vita izany dia mivadika ho azy avy amin'ny maody DMS mankany amin'ny maody maoderina. Misy fomba famerenana azy io hiverina. Tsy hiresaka momba an'io isika anio, noho izany dia nofaranantsika teto ny fizotran'ny fanavaozana ny firmware sy ny fihodinana mandroso izay heveriko fa ny folo minitra voalohany izay tena ilaina tokoa mba hahazoana antoka fa hafanaina sy marina daholo ny zava-drehetra. azo atao, ary ampitao hatrany an'io 36K isan'ora io herinaratra io ka tsy mila mandeha an-tongotra intsony ianao vao hidina, araho fotsiny ny torolàlana eo amin'ny efijery dia ho tonga amin'ilay teboka ianao, ka ny angona sasany tamin'ny alina farany rehefa Napetrako teo am-paosin-tànako ny paosin-tsoavaly P1, dia toa tsara daholo izany tao amin'ny fomba arrghh manohitra vatokely amin'ny maha-olombelona tsy lavorary antsika mihitsy. mitsambikimbikina kely fotsiny, fa ny tena zava-dehibe, hey, ny tianao holazaina dia ny hery lehibe indrindra amin'ny faharetana iray, ka ireo isa ireo dia mifanaraka tsara amin'ny iray minitra tadiavintsika, izany dia telo amby valo-polo amby valopolo, tena tsara tarehy eto. 316 317 dimy minitra ananantsika ave Ny fisarahana roa na sasany watts telo watts dia mitovy folo minitra mitovy roapolo minitra sy telopolo minitra ka io angamba no akaiky indrindra hitako fa misy metatra elektrika roa samy hafa izay mifanentana be tokoa fa mifanipaka ilay mpandaka samy izy ireo amin'ny maody atody miaraka amin'ny firmware vaovao Ny maodely maodely Power to p1pedals dia nampidirina voalohany tao amin'ny fanitsiana firmware tamin'ny volana febily ka io no fanitsiana faharoa an'izany ary heveriko fa milamina tsara izy tahaka ny eto amintsika t.
Ny tarika misy azy, tsara be ireto isa ireto, raha fintinina, raha tompona kicker tany am-boalohany ianao dia esory avy hatrany ny fanavaozana ary lanio ireo 10 minitra ireo na manao ny mandroso mandroso ho an'ny marimarina kokoa, hahazoana fitokisana sy fandraisana andraikitra tsara kokoa avy amin'ny ny fitaovanao, apetaho ny fanavaozana rehefa hitanao izany. Ny isa fampisehoana anao dia avo kokoa na ambany kokoa noho ny taloha. Angamba ianao nametraka olana naterak'izany izay teo foana, na manana olana vaovao ianao Nampahafantatra ny fomba hahalalanao fa sarotra ity, mila mahazo bisikileta miaraka amin'ny metatra elektrika tsara fantatra ianao ary mihazakazaka fitsapana vitsivitsy amin'ny fitsapana ataoko amin'ireo. pedaly tilikambo herinaratra amin'ny maodely maodely mety tsara, ka tena faly izahay mamela azy io eo
Ahoana ny fomba hanjeranao ny fiakarana Kickr?
Tsindrio ary tazomy ny bokotra maody fanidiana afovoany amin'nyKICKR CLIMBlavitra mandritra ny 3 segaondra mandra-pahazavana tsy miova ny LED fotsy eo afovoany. Tano nyCLIMB'slavitra eo akaikin'nyKICKRnaKICKRSNAP mandra-pahazavain'ny LED fotsy eo afovoany haingana, avy eo mivadika mafy.
Rahampitso, Trainiacs. Tsotra kely, loungey kely, karazana fialantsasatra ho ahy anio. Fony aho tao amin'ny foiben'i Zwift dia nilazan'izy ireo tamiko fa ny ambony indrindra amin'ny Zwifters tamin'ny fotoana iray dia 13000 herinandro vitsivitsy lasa izay.
Midika izany fa misy taonina iray vaovao aminao amin'ny Zwift, ary midika koa izany fa misy taonina iray ianao izay mila mahafantatra ny fomba hametrahana izany. Zwift tenany sy Wahoo KICKR manokana dia mamporisika ny hanao kalibration isaky ny tapa-bolana - tsy nanao iray aho tao anatin'ny enim-bolana teo ho eo, toa ny toa anao. Ka anio aho dia hanazava ny fomba hanamorana ny fomba mora foana sy tsy tapaka ny Wahoo KICKR na mpampiofana hafa anananao miaraka amin'ny Zwift.
Tsy nanomana an'ity sary kely tsy dia mahazatra ity aho, saingy nandaitra. (Hira fifaliana) Mazava ho azy, mba hanombohana ny fanamafisana izay tadiavintsika hahazoana valiny marina indrindra azontsika atao. Mila mahazo antoka izahay fa ny tarehimarika herinaratra apetrakay dia hita taratra amin'ny Zwift mba hahazoanao ny diany ic indrindra.
Ka mahazo ny fampihetseham-batana tsara indrindra. Nanoro hevitra ahy aho mba hamehezana ny fitaovanao isaky ny tapa-bolana na inona na inona zavatra hafa. Na, raha manana mpanazatra fiara tsy mivantana ianao, toy ny mpanazatra iray izay mbola eo ambony bisikiletanao ny kodiaranao, ary ny fihenjanana dia avy amin'ny fifandonana ihany, dia afaka miova mora foana io disadisa io.
Amin'ity tranga ity, Zwift dia mamporisika anao hamerina handamina ny mpanazatra anao isaky ny mandeha. Na izany na tsy izany, raha manana mpanazatra fiara mivantana toa ny Wahoo KICKR ianao dia tokony hamerina handamina indray isaky ny tapa-bolana, na raha nifindra toerana be ilay mpampiofana, na raha nisy fiovana lehibe teo amin'ny mari-pana, na raha nipetraka tamin'ny masoandro iny. Amin'ireo tranga rehetra ireo dia te-hamerina hanitsy ny fitaovanao ianao ka rehefa manomboka ny fizotran'ny fanamafisana amin'ny alàlan'ny fihodinana kely dia tianao ny hanafana ny mpanazatra mandritra ny 10 minitra.
Mandeha kely fotsiny mandritra ny 10 minitra. Hanao izany isika izao. (Mihodina kodiarana) Eny ary, raha vao manafana ny mpandeha ianao dia te-hanao zavatra vitsivitsy.
Raha ity ny Wahoo KICKR, midina. Voalohany, mila mahazo antoka ianao fa manana fifandraisana Amp Plus na Bluetooth, mirehitra ireo jiro ireo ary mifandray amin'ny Zwift ianao. Rehefa vita izany dia miverena miverina amin'ny mpampiofana anao ary sokafy ny fampiharana Wahoo Fitness.
Midira ao amin'ny fampiharana ary raha vao misokatra izy dia te handeha amin'ireo sensor misy anao sy ny mpanazatra izay ilainao hamboarina. Hifandray izy io. Ary avy eo mitady ny Spin Down etsy ambany satria tena hanamboatra ny Wahoo amin'ny app Wahoo isika.
Tsy izany fanazavan'i Zwift izany. Ho tonga ao anatin'ny fotoana fohy aho. Ka mahavoa Spin Down.
Ataovy mihodina. Ahantony ny telefaona satria mila mahazo ny mpampiofana hatramin'ny 36 km / ora ianao. Rehefa nokapohinao izy dia ajanony.
Ary avelao izy hanao ny azy. Andao. Vita ny spin-down.
Voakilasy ny mpanazatra anao Wahoo KICKR. Ary ity dia mifandray amin'i Zwift. Ahoana izao raha manana mpanazatra hafa ianao? Ahoana raha tsy manana ny fampiharana fitaizam-batana Wahoo ianao? Ahoana raha mila manao izany avy ao anatin'ny Zwift ianao.
Hahatratra izany isika aorian'ny hafatra vaovao vaovao avy amin'ny mpamatsy vola Sco-die anay. BTW, raha olona Zwift ianao ary efa namono azy dia misy rohy amin'ilay famaritana etsy ambany, marina. Amin'ity minitra ity, velona ny kitapo Trainiac, fivarotana Trainiac an'i Sco-die.
Ny rohy dia ao amin'ny famaritana etsy ambany. Sco-die no nanome anao ity lahatsoratra ity. Te-hijery tsara toa ahy amin'ny fiofanana sy hazakazaka ve ianao? Ireo kitapo no hany fitaovana ampiasaiko hikapohana ny mofo sy hanaronako ny tratrako.
Indraindray ny vatana hitazonana anao milamina sy miraikitra nefa tsy tery, manisy fonosana eraky ny lamba mba hitazomana tsara ny kit raha tsy manao anao ho saosisy ea. Ny kitapo Trainac kitapo dia vita isam-bolana vitsivitsy, fa amin'ny Sco-die kosa ianao dia mandeha amin'ny Sco-die dot com, Forward Slash Taron, ary Athletes ao amin'ny Team-Trainiac hahazoana 11% amin'ny kaomandy Sco-die miaraka amin'ny kaody fihenam-bidy ny kaontin'ny Team-Trainac misy azy ireo voatanisa. Ahoana raha tsy mampiasa Wahoo KICKRand ianao dia mila manatsara ny fitaovanao? Indrindra raha mpanazatra kodiarana io.
Amin'ity tranga ity, Zwift dia manana safidy ao amin'ny Zwift izay ahafahanao manao ny calibration. Ka sokafy ny Zwift - eny an-dalana, araho aho amin'ny T, no anarana voalohany, Rathalonspace Taron no anarana farany. Raha Taron fotsiny no tadiavinao, mankanesa ao amin'ny app, Whoah, whoah, whoah.
Milatsaka, miditra ao amin'ny fampiharana, ary ity efijery ampiasain'ny fitaovana ity dia ho tonga any amin'izay ilainao hampifangaroana ny fitaovanao. Ka izao dia mila mampifangaro ny tahan'ny fitempon'ny foko aho. Ity dia hitondra anao amin'ity efijery ity izay anananao ny fitaovanao rehetra mifangaro.
Ary hitanao fa misy ifandraisany amin'ny mpampiofana ny loharano herinaratra. Ankehitriny ianao dia afaka manao izany amin'ny Wahoo na fitaovana hafa, azo antoka fa tsy maintsy atao eto izany. Ny fipihana an'ity kisary wrench ity dia hitarika anao amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny kalibration spin-down.
Tsindrio ny Continu. Manafaingana ny 37 mph. Kilometatra isan'ora.
Vita ny calibration. Misy ny fahombiazana. Ary izao dia afaka mandeha amin'ny orinasanao ianao amin'ny fahalalana ny Wahoo KICKR anao na ny mpanazatra bisikileta manan-tsaina hafa voahodina.
Araka ny nolazaiko dia ataovy izany isaky ny tapa-bolana na inona na inona mpampiofana anananao. Raha nifindra ny mpanazatra mihitsy ianao, raha toa ka nandalo fiovana matotra ny mpanazatra, raha nitety faritra maro ianao, na raha mampiasa mpanazatra bisikileta izay tsy misy afa-tsy ny fikorontanana no mahatonga ny fanoherana. Amin'ity tranga ity, ataovy ity calibration ity alohan'ny dia tsirairay.
Noho izany, ry Trainiacs, ianareo izao dia vonona amin'ny fiofanana Zwift marina sy azo antoka. Mitadiava an'i Taron amin'ny Zwift, araho aho eto. Ato anatin'ny volana vitsivitsy dia hanomboka andiam-panofanana ho an'ny vondrona izahay.
kajy kaloria bisikileta
Ary zahao ny rohy ao amin'ilay famaritana etsy ambany raha mahita ny tenanao mandroba na inona na inona ianao. te-hahazo ny fitaovana - okay. Trainiacs taty aoriana.
Tena marina ve i Wahoo Kickr?
Ilay vaovaoKICKR, mpanazatra marani-tsaina mitovy amin'ny ampiasain'ny ekipa World Tour INEOS sy BORA-hansgrohe, no mitondra tsena vaovao marobe. Ity kinova an'ny sokajy ityKICKRmanadio heryaraka ny marinahatramin'ny +/- 1% avy amin'ny +/- 2% amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fanaraha-maso auto-automatique propriété.
Hey ry zalahy, ity dia Ray avy amin'ny dcrainmaker.com ary androany manana ny vaovao Wahoo KICKR aho....
KICKR vaovao? Ny 'KICKR Vaovao' fotsiny dia ara-teknika
Mila manamboatra ny Wahoo Kickr ve ianao?
nyKICKRSYKICKRfototraAzamitakycalibrationmba hitazomana ny fahefan'ny herinaratra voalaza.Wahoo'santontan-taratasy milaza fa: spindown no atolotra isaky ny 2 herinandro na aorian'ny fitaterana nyKICKRmankany amin'ny toerana vaovao.16. 2020.
Impiry aho no mila manamboatra ny Kickr-ko?
nyKICKR, herymitakyara-dalànacalibrationindray mandeha isaky ny 7 ka hatramin'ny 10 andro fiasana. Na izany aza, nyKICKRanatn'nymitaky calibrationalohan'ny fitsangatsanganana rehetra ho an'ny fandrefesana herinaratra marina. ara-dalànacalibrationmatetika dia atao amin'ny alàlan'ny fampiharana Wahoo Fitness izay azonao sintonina avy amin'ny fivarotana iTunes na Google Play for Android.26 2019.
Mila fanitsiana ve ny bisikileta Kickr?
Tsy toy ny Wahoo Smart Trainers,Bisikileta KICKRmanisa ny herinaratra amin'ny alàlan'ny herinaratra sy ny herin'ny herinaratra ampiarahina amin'ny motera efa mandroso, mandà nyNILAho an'ny fanampinycalibration. Mba hiantohana ny fahamarinan-kery eto an-tany< 1%, each Bisikileta KICKRmaotera nozahan-toetra tsirairay,calibrated, ary voamarina ao amin'ny ozinina.
Tokony hahazo Wahoo Kickr ve aho?
nyWahoo Kickrdia fitaovana tsara kasaina hataomanaomora kokoa amin'ny bisikileta amin'ny lafiny rehetra. Safidy mora azo io rehefa tsy miasa ny toetr'andro na tsiaeFAny fotoanamahazoivelany. Mora kokoa izany satria mahatonga anao ho mendrika kokoa hahafahanao mankafy ny mandeha rehefa afakamahazomivoaka.24. 2020.
Tokony esory ny Wahoo Kickr?
Zava-dehibe ny fanarahana ireto torohevitra fikojakojana etsy ambany ireto aorian'ny fotoam-pampiofanana tsirairay mba hahazoana antoka fa mahomby ny asanaoKICKRBisikileta:lahiny fakana herinaratranyKICKRMITANAO rehefa tehirizina na tsy ampiasaina, na hialana amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fampidirana amina mpiaro onja izay manohana an'io endri-javatra io.
Ianao ve mila manamboatra ny Kickr core?
nyKICKRSYKICKR Core dia mila fanamafisanamba hitazomana ny fahefan'ny herinaratra voalaza. Hoy ny rakitsoratr'i Wahoo: Aspindowndia atolotra isaky ny 2 herinandro na aorian'ny fitaterana nyKICKRmankany amin'ny toerana vaovao.16. 2020.
Ratsy amin'ny bisikiletanao ve ny mpanazatra bisikileta?
Mandritra ny mitaingina ampanazatrahanimbanyNofongorana tamin'ny fomba ofisialy ny angano momba ny karbaona, mbola mety hampidi-doza anao ny mitaingina anaty tranony bisikiletanaoamin'ny fomba roa: ny tadin'ny kodiarana sy ny harafesin'ny hatsembohana.04.17.2020
Misy fanavaozana firmware ho an'ny KICKR 14?
Ity pejy ity dia misy naoty fanavaozana ny firmware ho an'ny KICKR '14 tany am-boalohany, azo fantarina amin'ny tanany mainty, toy ny sary etsy ambony. Ho an'ny fametrahana, azafady mba jereo ny torolàlana momba ny iOS na Android. Ireo mpampiasa voakasik'ity olana ity dia mila manamboatra spindown orinasa aorian'ny fanavaozana ny firmware
Misy fanavaozana firmware ho an'ny Wahoo KICKR V5?
Efatra volana aorian'ny famoahana voalohany ny KICKR v5 dia namoaka fanavaozana firmware i Wahoo tamin'ny farany mba hiresahana ny tsy fahatomombanan'ny herinaratra haingam-pandeha ambany.
Fa maninona i Garmin no nanampy ny fanohanan'ny Fe-C an'i KICKR?
Ny fanampiana ny fanampiana ANT + FE-C dia mamela ny KICKR sy SNAP hofehezina amin'ny fitaovana na fampiharana FE-C, toy ny solosaina bisikileta Garmin. Ny fanatsarana ny herinaratra refesina mandritra ny vanim-potoana hafainganam-pandeha dia namela anay hanatsara ny fahatsapan'ny mpanazatra rehefa mampiasa maody fanahafana (ohatra: rehefa mampiasa Zwift).